Sida Lacag Loogu Sameeyo Ikhtiyaariyada Crypto | vfxAlert official blog
Ka dib qodobka ku saabsan sida loo falanqeeyo falalka ganacsatada waaweyn ee suuqa cryptocurrency, ama sida kuwa sameeya suuqyada sidoo kale loogu yeero, aan isku dayno inaan fahamno sida maalgashadayaasha hay'aduhu u dhaqmaan. Waxay haystaan lacag badan waxayna dejin karaan isbeddellada muddada-dheer ama si dhakhso leh uga beddelan kan hadda jira. Furitaanka heshiisyada jihooyinkooda waa ikhtiyaar aad ufiican oo loogu talagalay sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada loo yaqaan 'crypto' .
Suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency' , maalgashadayaasha hay'adaha waxaa si xog-ogaal ah u matalaya barxadda Tether, oo soo saarta astaamaha USDT ee ku dhegan doolarka Mareykanka, iyo sanduuqa maalgashiga ee 'Grayscale investment trust'. In kasta oo qayb yar oo ka mid ah maalgashiyadu (in ka badan $ 100 bilyan) - ikhtiyaarrada cryptocurrency ee calaamadaha bilaashka ah ee tirakoobka waxay muujinayaan in dhaqdhaqaaqyada caasimadan oo ah qaab deynta Tether ay inta badan dhacaan ka hor isbeddellada waaweyn ama dib u noqoshada suuqa lacagta dijitaalka ah.
Tether wuu wanaagsan yahay maxaa yeelay wuxuu si toos ah ula shaqeeyaa adeegyada waaweyn ee OTC ee Shiinaha, isagoo iibsanaya 68% arrinta calaamadda USDT. Wuxuu "kaga tagayaa" dufcado waaweyn oo dhawr boqol oo milyan ah halkii macaamil ganacsiba.
Xilliga la sii daayo arrin ballaaran waxaa lagu raad raaci karaa adeegga whale-alert. Ka taxaddar markaad wax iibsaneyso adoo adeegsanaya calaamadaha ganacsiga calaamadaha ikhtiyaariga ah : istiraatiijiyaddu waa inay tixgelisaa xaqiiqda ah sii deynta lacagta cusub, oo aan wax macaamil ah lahayn.
Suuqa wuxuu bilaabaa inuu si tartiib tartiib ah u koro maalinti xigta kadib markii arinta la daabacay. Waxaa habboon in laga falceliyo arrinta badan ee 200-500 milyan USDT maalintii. Wax kasta oo ka hooseeya xadkaan ma kicin karo kobaca suuqa cryptocurrency. Mararka qaarkood, gaar ahaan marka qiimaha hantida dijitaalka ahi hoos u dhacdo, arrintu waxay sababtaa kororka hal ama laba maalmood. Ganacsade adeegsanaya ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee 'cryptocurrency' nuqul ganacsiga waa inuu kaliya ganacsadaa xulashooyinka muddada gaaban. Mugga cusub ee Tethers ayaa laga yaabaa inuusan ku filneyn inuu abuuro isbeddel buuxa!
Grayscale waa sanduuqa maalgashiga ee ugu weyn ee soo saaraya cutubyo aamin ah oo ay taageerayaan cryptocurrency dhab ah muddo 7 sano ah. Shirkaddu waxay ruqsad siisay 14 aaminaad oo lagu kalsoon yahay oo Mareykanka ah, kuwaas oo loo heli karo oo keliya maalgashadayaasha xirfadleyda ah ee diyaar u ah inay maal-gashadaan ugu yaraan $ 25 kun muddo lix bilood ah ama sanad ah iyaga oo aan xaq u lahayn inay la baxaan lacagaha.
Ikhtiyaar kale oo loogu talagalay maalgashadayaasha tafaariiqda ayaa ah inay iibsadaan saamiyada kalsoonidaan ama ay furaan ikhtiyaar loo yaqaan 'crypto option' oo ku saabsan suuqa OTC, oo loo soo saaray qadarka loo yaqaan 'cryptocurrency' ee lagu iibsaday maalgashiga macaamiisha hay'adaha. Grayscale wuxuu helay seddex Shati oo SEC ah si loogu soo saaro saamiyada saddexda aaminaad: Bitcoin, Ethereum, iyo Litecoin. 2021, 22 AltCoins ayaa lagu daray iyaga, oo ay ku jiraan ZCash, Monero, Polkadot, iwm.
Shirkaddu waxay samaysaa ganacsi gebi ahaanba sharci ah, iyadoo maalin kasta ku daabacda warbixinno Twitter-ka, iyada oo laga boodo oo keliya maalmaha aysan jirin rasiid / kharash lagu bixiyo.
Waad kala socon kartaa ficilada sameeyayaasha suuqyada safka ugu dambeeya ee isbeddelada maalinlaha ah. Haddii ay ka sarreeyaan 5% BTC iyo 10% lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', ganacsaduhu waa inuu ka fekeraa furitaanka Ikhtiyaarka Wicitaanka. Sida kiisaska falanqaynta Tether, booskaas oo kale waa in si joogto ah loola socdaa barnaamijyada ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay barnaamijka 'cryptocurrency' ee macaashka / luminta oo la xiro marka isbeddelku isbeddelo.
Noocyada falanqaynta ficilada maalgashadayaasha hay'adaha
In kasta oo uu jiro xiriir muuqda oo u dhexeeya kororka keydadka waaweyn iyo iibka, taas oo isla markiiba saameyn ku yeelaneysa xaddiga lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' gebi ahaan ama hanti shaqsiyeed, istiraatiijiyad kasta oo falanqeyn ah laguma kalsoonaan karo 100%. Sababta fashilka qaybta calaamadaha bilaashka ah ee ikhtiyaariga ah ee 'crypto option free' waa maalgashiga muddada-dheer ee kuwa sameeya suuqa, markay soo galaan suuqa oo ay xiraan macaamillada qaybo ka mid ah, si aysan u keenin hoos u dhac weyn ee xigashooyinka.
Falanqaynta boorsooyinku waxay si guud u tilmaamayaan jihooyin isbeddel ah oo "soo noqnoqonaya", iyagoo rajaynaya inay dhawr macaamil sameeyaan, oo aan gebi ahaanba dhigin deebaajiga. Calaamadaha lagu sharaxay ee lacagaha Tether iyo Grayscale ayaa ka saxsan arrintan, sidaad adigu u arki karto naftaada - tirakoobyada iyaga ayaa laga heli karaa shabakadaha bulshada, boggaga gaarka ah, shirarka iyo qolka ganacsiga ee Forex .
Habka ugu fudud ee falanqaynta ayaa isku daraya jaantusyada USDT iyo Bitcoin ee ka socda bogga caanka ah ee CoinMarketCap. Tallaabada ugu horreysa waa in la aado bogga Tether USD. Dantayada ma noqon doonto sicirka sarrifka, laakiin ka faa'iideysiga (arrinta). Waxaa lagugula talinayaa inaad doorato waqti go'an oo aan ka badnayn 7 maalmood ee la soo dhaafay. Waxaan u dooranay isla muddadaas Bitcoin - halkan kama fiirinayno xarfaha waaweyn, laakiin dhaqdhaqaaqa qiimaha. Ma jiro ikhtiyaarrada 60 ee labaad ee 'cryptocurrency' !
Shaashadda shaashadda waxaan ku sameynay iskudhaf garaafyo ah, waxay ku habboon tahay in la sameeyo iyadoo la adeegsanayo laba daalac iyo astaamo otomatig ah . Waxyaabaha kor ku xusan waxay muujinayaan dayrta xooggan ee toddobaadlaha ah ee BTC, oo istaagtay maalin kadib suuqii degdegga ahaa ee ka badnaa $ 1 bilyan USDT, oo la sii daayay hal maalin.
Jaantuska isbeddelada ee ka faa'iideysiga sanduuqa 'Grayscale fund' iyo habdhaqanka la xiriira ee sarrifka Bitcoin waxaa laga heli karaa isweydaarsiga 'Bybt cryptocurrency'. Ogsoonow sida maalgashadayaasha hay'aduhu ay si dhakhso leh u joojiyeen iibsashada Bitcoin horaantii sanadkan, taas oo ku dhacday sicirka sarrifka ka dib markii ay joojiyeen muggooda maalgashiga oo kordhay muddadii ugu dheerayd taariikhda.
Midkoodna calaamadaha kor ku xusan kuma ansaxinayaan Put-option, gaar ahaan ikhtiyaariyada ganacsiga 'cryptocurrency options copy copy' . Cryptocurrency wuxuu leeyahay astaamo aan fiicnayn oo kor u kac ah, iyo kuwa sameeya suuqyada, sida maalgashadayaasha hay'adaha, qayb kaliya oo ku dhow jagooyinkooda, inta badan qaladaad sameeya go'aaminta sare ee suuqa.
Cryptocurrency waa qayb weyn oo ka mid ah aaladda suuqa ee loogu talagalay ikhtiyaar dhexdhexaad ah iyo mid muddo-dheer ah oo CALL-ikhtiyaar ah, iyada oo la siinayo maal-gelinno dheeri ah oo dheeri ah iyo macaamil qayb faa'iido leh xilliyada hoos-u-dhaca la saadaaliyay. Saadaalinta ka imanaysa dhicitaanku wax macno ah ma samaynayso, marka la eego halista badan ee luminta iyo aragtida aadka u weyn ee ikhtiyaarrada calaamadaha kumbuyuutarka ee loogu talagalay kobaca xigashooyinka.
Soo Koobid topic Mawduuca la tixgeliyey ee baadhitaanka mugga badan ee jagooyinka loo yaqaan 'cryptocurrency' ayaa muujinaya farqi weyn oo u dhexeeya calaamadaha ganacsiga ee ikhtiyaariga ah ee loo yaqaan 'crypto options' iyo qaababka dhaqameed ee falanqaynta farsamada Forex. Hufnaanta iyo furfurnaanta xannibaadda ayaa u oggolaanaysa ganacsadaha inuu helo macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan nooc kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa raasumaalka adduunka ee hantida dijitaalka ah.
Waxaa xusid mudan in calaamadahaani ganacsi ee loo yaqaan 'crypto' ay ka waxtar badan yihiin tilmaamayaasha farsamada, kuwaas oo astaamahoodu dib u dhacaan ama qayb ahaan been yihiin. Falanqaynta falalka maalgashadayaasha hay'adaha ayaa ah hal tusaale oo ah qaabka loo wajahayo saadaasha isbeddellada loo yaqaan 'cryptocurrency,' taas oo ay saameyn ku yeelatay heerka baahinta, waxqabadka dadka soo saaray koodhka, astaamaha tikniyoolajiyadda, iwm.